Nitohy ny fety… : mbola mahaliana ny mpanao vakodrazana | NewsMada
Nitohy ny fety… : mbola mahaliana ny mpanao vakodrazana
Nitohy, hatramin’ny omaly, ny fety aman-danonana fanamarihana ny taom-baovao 2016. Raha nangina tanteraka ny tany anaty efitrano fanaovana fampisehoana, eto Antananarivo sy ny manodidina, tsy toy izany kosa ny tetsy Analakely sy teny amin’ny tsena, tsy lavitra ny Renivohitra.
Nahazo laka, teny amin’ireny toerana ireny, ny mpanao vakodrazana. Any ambanivohitra any no tena ahitana itony tarika itony, mitety tanàna, mizara ny talentany sy mampifalifaly ny mponina, indrindra ny kilonga, rehefa asaramanitra, tahaka izao. Tonga aty an-dRenivohitra ny sasany amin’izy ireny, mampahafantatra sy mampahatsiahy ity fomba nolovaina tamin’ny andron’ny mpanjaka ity.
Ahitana mpikambana tsy latsaky ny efatra ny tarika iray. Matetika, amponga sy sodina ary langoraona no zavamaneno ampiasain’izy ireo. Azo lazaina ho mampifangaro ny hiragasy sy vakodrazana izy ireo. Na eo amin’ny hira izany na amin’ny fitafy : ny akanjo miloko mena miampy pataloa mainty ary satroka, ho an’ny lehilahy ; akanjo tohitena sy lambafotsy ary ny volo mitàna ivoho kosa, ho an’ny vehivavy.
Ankoatra ny maha fomba amam-panao ny fanaovana vakodrazana, rehefa fety toy izao, fotoana iray hararaotina mba hitadiavam-bola koa izany ho an’ireo tarika mpiangaly azy. Vao tao anatin’ny efatra andro izay no tena tsara ny tsena, raha ny nambaran-dRasolo, filohan’ny tarika iray, tonga hatreny Mahazo, omaly.
Mahazo hatramin’ny 30.000 Ar izy ireo, ao anatin’ny iray andro. Tamin’ny ankatoky ny fety, mbola variana tamin’ny sakafo ny ankamaroan’ny olona, araka ny nambarany hatrany. Efa manampo sahady ireto mpanao vakodrazana ireto fa hangina tsikelikely ny tsena, manomboka amin’ity herinandro ity ka amin’ny fetin’ny Fahaleovantena indray mifankahita.